Ogaden News Agency (ONA) – Wadanka Qadar oo Cabasho Ka Gudbisay Xulafada Sacuudiga.
Wadanka Qadar oo Cabasho Ka Gudbisay Xulafada Sacuudiga.
Dalka Qatar ayaa ururka ganacsiga adduunka ee WTO u gudbisay ashtako ka dhan ah saddex ka mid ah afarta dal ee Carbeed ee dalkaas xiriirka u jaray bishii June, ayaga oo ku eedeynaya inuu taageero argagixisada.
Ashtakadan ayaa ku baaqeysa wada-hadallo ay Qatar la yeelato dalalka Sacuudiga, Bahrain iyo Imaaraadka Carabta, taasi oo billaabeysa muddo lixdan maalmood ah oo dalalkan ay ku xaliyaan xiisadooda, ama ay wajahaan ganaaxyo.
Saddexdan dal iyo Masar ayaa xiriirka diblomaasiyeed u jaray, ayaga oo Qatra ka xirtay xuduudahooda dhulka iyo hawada 5-tii June, sababo la xiriira inay taageerto xagjiriinta. Qatar ayaa beenisay inay tagaeerto argagixisada, waxaana ay sidoo kale ku gacan seertay diiwaan dalalbyo ah oo ay afartan dal soo jeediyeen, si Qatar ay uga qaadaan xanibaadda.
Ashtakada Qatar, ayaa waxaan ku jirin dalka Masar, hase yeeshee waxa ay saddexdan dal ee kale ay ku eedeeneysaa inay ku kacayaan xadgudubyo dhinaca ganacsiga ah, islamarkaana ficilladooda aysan saameeneyn oo kaliya Qatar, balse sidoo kale dalalka kale ee ganacsiga uu kala dhaxeeyo Qatar.